*Indawo Yokubhukuda * Isitudiyo Sesimanje Esilungisiwe C102 - I-Airbnb
*Indawo Yokubhukuda * Isitudiyo Sesimanje Esilungisiwe C102
Providenciales, Turks and Caicos Islands, i-Turks ne-Caicos Islands
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Piotr
U-Piotr Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela epharadesi lethu elincane e-Providenciales, e-Turks nase-Caicos. Sithemba ukuthi uzojabulela isitayela sethu sesimanje se-condo njengathi. Amafulethi ethu atholakala e-Queen Angel Resort, ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ebhishi elingu #1 emhlabeni, i-Turtle Cove Marina, kanye ne-Smith 's Ridge indawo engcono kakhulu yokutshuza ngaphansi kwamanzi esiqhingini. I-Turtle Cove iyindawo ethandwayo yezivakashi enezindawo zokudlela eziningi, uhambo lokuzijabulisa nezindawo zokuheha ezitholakalayo. I-condo isanda kulungiswa ngokuphelele futhi yalungiswa kabusha.
4.88 · 42 okushiwo abanye
I-Turtle Cove Marina inikeza uhambo olumnandi, izindawo zokudlela nokukhangayo.
Situsa ukuzama ukuluma koshaka, i-Magnolia, i-Baci Ristorante, i-Ristorante kanye ne-Green Bean Cafe. Konke okunambithekayo futhi okuphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo.
Ukudlulela emgwaqweni usuka endaweni yokungcebeleka yisitolo se-scuba, uhambo lwesikebhe esiqhingini, i-scooter bobs imoto/izindawo zokuqasha amabhayisikili, izikebhe nezikebhe, ikilabhu ye-yacht, i-Glow FitnessI, amafulethi okudoba nokuningi.
Ukuhambahamba imizuzu engu-7 ukuya ebhishi elihle lomusa, kanye namatshe ama-smith, ukutshuza okungcono kakhulu esiqhingini. Siphinde sibe yimizuzu engu-2 yokuhamba ngemoto ukusuka e-Coral Gardens, enye indawo enhle yokutshuza ngaphansi kwamanzi esiqhingini.
Ngenkathi ubhukuda, uzokwazi ukubona okulandelayo: izimfudu, inhlanzi ye-parrot, i-queen angelfish, inhlanzi yebhotela, imisebe yokutshuza, ama-lobsters, ama-cucreon olwandle, inhlanzi ye-puffer, ama-snappers, amaqembu, i-makefish nokunye okuningi.
Itholakala e-Turtle Cove, imizuzu nje engu- ukusuka e-Fish Fry edumile ( Njalo ngoLwesine e-Bight Park yezingane kusuka ngo-5pm- 9:30pm) kanye ne-Smith 's Atlantic, i-Queen Angel Condominium inikeza indawo enhle yokuhlala. Sisekude ngemizuzu engu-10 kuyo yonke into: Isikhumulo sezindiza, i-Grace Bay Beach, i-Blue Hills, i-Leeward, ne-Chalk Sound. Kunezindlela ezingu-6 ezahlukene zokudlela ezinebanga lokuhamba ngezinyawo nezindawo ezingu-2 ezahlukene zokufinyelela ebhishi.
UPiotr Ungumbungazi ovelele